Iska yaree cabsida badan ee Cudurka Coronavirus. (Akhriso 5 xaqiiqo oo lagu farxi karo & COVID-19) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Yaa ka danbeeyay Dadkii lagu xasuuqay degaanka Gololley..? (Meydadkooda oo la keenay Muqdisho)
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya xasuuq ka dhacay Degaanka Gololleey ee degmada Balcad oo lagu laayey 8 qof oo u badnaa...
Diyaarad Gargaar sida oo lagu rasaaseeyay Garoonka Qansaxdheere (Yaa ka danbeeyay..?)
Wararka laga helayo Gobolka Bakool ayaa sheegaya in diyaarad gargaar siday lagu rasaaseeyay Garoonka degmada Qansaxdheere xilli ay ku dageysay Garoonkaasi.
Maxaa loo xiray Agaasimihii Aamin Ambulance C/qaadir C/raxmaan..? (Akhriso faahfaahin)
Ciidamada Booliska ayaa caawa maqribtii xabsiga u taxaabay Cabdiqaadir C/raxmaan Aadan oo ahaa agaasimaha Aamin Ambulance, iyadoo faahfaahin laga helayo xarigiisa.
KASHIFAAD: Dowladda Somalia Maxay u qarisaa tirada Dadka laga baaray Cudurka Coronavirus..?
Dowladda Soomaaliya ayaa joojisay inay shaaciso tirada dadka laga baaro cudurka Coronavirus, waxayna wasaaradda Caafimaadka xukuumadda Federaalka ay kaliya sheegtaa tirada dadka...
Sidee Askari Itoobiyaan ah Berdaale ugu soo riday Diyaaraddii African Express? (Dhageyso)
Iyadoo aanu weli soo bixin baaritaanka rasmiga ah ee lagu sameeynayo Diyaaradeed Shirkadda African Express ee lagu soo riday Magaalada Berdaale ee...
WAR CUSUB: George Flyod oo meydkiisa laga Cudurka Coronavirus, balse u dhintay…
Wararkii ugu danbeeyay baaritaanka kiiska ninkii madoobaa ee George Floyd oo Boolis Caddaan ah ku dileen Gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu...
Imaaraadka oo si aan la fileyn u cambaareeyay Qorshaha Mareykanka iyo Israa’iil ee Falastin
Imaaraadka ayaa si lama filaan ah u cambaareeyay qorshaha Yuhuudda iyo Mareykanku wataan, iyadoo sheegay in tallaabo kasta, oo hal dhinac, oo...
Bannaanbaxayaal isugu tegay Aqalka Cad & Dhismooyin u dhow oo Dab la qabadsiiyey (Sawirro)
Waxaa sii xoogeystay bannaanbaxyada waaweyn ee ka dhashay dilkii Ninka Madowga ahaa ee George Flyod ee askariga Caddaanka ah uu ku dilay...
Deni: “Madaxweyne Farmaajo waxaan uga digeynaa Doorasho sababta dagaallo sokeeye..”
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka digay inay dagaal sokeeye dhalin karto Doorashada ay dooneyso dowladda Soomaaliya inay dalka ka qabato.
Dadka laga helay Cudurka Covid-19 gudaha Somalia oo sare u dhaafay 2000 & Wararkii ugu danbeeyay
Wasaaradda Caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyay 47 qof oo...
Dowladda Somaliya oo Agaasime Guud u magacawday Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Galmudug
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Galmudug Maxamed Xaashi Carrabey ayaa loo magacaabay Agaasime Guud oo ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Madasha Xisbiyada oo u jawaabtay Ra’iisal wasaaraha, kuna baaqday Shirka Saamileyda Siyasadda
Madasha Xisbiyada Qaran ee ay hoggaamiyaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la qabto shir ay isugu yimaadaan dhammaan Saamileyda...
Taliye Odowaa: “Dadka Ciidamada Dowladda ku eedeeyay xasuuqii Gololey Caddowga ayay u adeegayaan”
Taliyaha ciidamada xoogga Dalka Jeneraa Odawaa Yuusuf Raage ayaa iska fogeeyay in ciidamada dowladda ay ku lug leeyihiin xasuuq degaanka Gololley loogu...
Iska yaree cabsida badan ee Cudurka Coronavirus. (Akhriso 5 xaqiiqo oo lagu farxi karo & COVID-19)
Inkastoo kumanaan qof uu dilay, boqolaal kun oo kalena uu soo ritay, dalal badan uu bandow ka dhigay oo oloshiina istaagtay, dartiisna dhaqaalaha dunida uu hoos ugu dhacay, loona xiray Masaajiddii, Jaamacadihii, dugsiyadii waxbarashada iyo goobaha la isugu yimaado, haddana Coronavirus sida looga wada baqayo uma aha musiibo aan dheg la qabto lahayn.
Cudurkan oo kasoo bilowday Novermbar 2019 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, haddana wuxuu si weyn usoo shaac baxay Decembar 2019, isagoo si weyn ugu faafay dalka Shiinaha, kadibna u gudbay caalamka oo dhan, iyadoo uu hadda fara ba’an ku hayo dalalka Yurub, Mareykanka iyo Aasiyada kale.
Shan xaqiiqo oo cudurkan COVID-19 laga ogaaday ayaa rajo gelinaya dadka, waxayna kaa yareynaysaa cabsida badan ee laga qabo magaciisa iyo sida uu dunida u gilgilay xilligan, waxayna kala yihiin:
1- Marka loo barbar dhigo cudurrada la nooca ah ee faafa, waa cudur aan dilaa ahayn, waxaana u dhinta 1% dadka uu ku dhaco, taasoo micnaheedu yahay in 99% ay ka kacayaan ama ka bogsoonayaan. Cudurradii la mid ahaa sida Ebola wuxuu dilay 99%. SARS ayaa isna 11% galaaftay dadkii uu ku dhacay.
2- Cudurkan COIVD-19 ee Coronavirus uu keeno uma badna caruurta ama wuxuu ugu dhacaa si ka fudud dadka kale, waana arrin yaab leh oo uu la gaar yahay cudurkan.
3- In dadka qaarkii ay cudurka ka bogsoonayaan iyagoo aan xaalad halis ah gaarin, dhaqtarna la jiifin.
4- In durba la helay dawooyin lagula tacaalo, sida kaniiniga ‘favipiravir’ oo dad badan oo bukaan u ahaa cudurka wax weyn loga gartay.
5- In dunidu ku tartameyso sidii tallaal iyo dawo loogu heli lahaa cudurkan, iyadoo Shiinaha oo kaliya ay ka socoto tijaabada 5 tallaal oo kala gaara ah, rajo badan ayaana laga qabaa in dawo iyo tallaalba loo helo.
Cudurkan dalal badan oo awood is biday ayuu tusiyey tabartooda, waxaana qof kasta ku waajiba inuu qaato tallooyinka caafimaad, isla markaana uu badsado ducada iyo Alle ka cabsiga.
Hoos ka daawo Prof. C/casiis Maalingur oo ah Aqoonyahan cilmiga Difaaca jirka ku heysta shahaadad PhD a oo ka hadlaya sida looga hortegi karo cudurka COVID-19.
Previous articleAskar ka tirsan Ciidamada dowladda oo ku dagaalamay Suuqa Bakaaraha & Qasaare ka dhashay..
Next articleCulimada oo ka hor yimid Amarkii maamulka Puntland ku xiray Masaajidda & Dugsiyada Quraanka.
XOG: Wasiirada & Xildhibaanada Hawiye oo isla gartay Qorshe ku saabsan maqaamka G/Banaadir
Alshabaab oo Weerar ku qaaday Kontarol laga ilaaliyo degmada Balcad & Faahfaahin laga helay
Dowladda Somalia oo shaacisay Xilliga Dib loo furayo Duulimaadyada Gudaha Dalka
Ciidamda Amniga Muqdisho oo Qarxiyey Miino Saacado hakad gelisay Jid muhiim ah
Ciidamo ka goostay Puntland oo taageeray Dowladda Somaliya & Gobolka ay ka taliyaan oo…